घट्यो सुनको मूल्य — Sanchar Kendra
१गृहमन्त्रीको यस्तो कडा निर्देशनले देशैभर तरंग, सेनाको हेलिकोप्टर मनाङतर्फ उड्दै
२निरन्तरको वर्षापछि देशभर बाढी र पहिरो- कहाँ केकति क्षति भयो ?
३नयाँ दिल्ली उड्नुअघि झलनाथ खनालले ईश्वर पोखरेललाई छोडे यस्तो सन्देश
४भारत नै लानुपर्ने गरी खनालको स्वास्थ्यमा देखिएकाे समस्या के हो ?
५विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले गर्यो यस्तो निर्णय, उद्धार, राहत तथा उपचारमा जुट्न निर्देशन
६नेपालमा बाढी-पहिरोको बितण्डा: यस्तो छ अहिलेसम्मको ताजा अपडेट, कहाँ-कहाँ के भयो ?
७तोलामा १५०० रुपैयाँले बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
८नारायणी नदी इतिहासकै उच्च विन्दुमा, मेयर रेनु दाहालले दिईन यस्तो कडा निर्देशन
९सभामुख र स्वास्थ्यमन्त्री सिन्धुपाल्चोकको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा जाँदै
१०सिन्धुपाल्चोकमा बाढीमा फसेकालाई सेनाले हेलिकोप्टरबाटै यसरी गर्यो उद्धार, भिडियोसहित
११झलनाथ खनाललाई थप उपचारका लागि दिल्ली लगिंदै
१२आज कहाँ-कहाँ आउन सक्छ बाढी ? हेर्नुहोस बिस्तृतमा
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य घटेको छ । आइतबार प्रतितोला ९४ हजार १०० रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य आज ३०० रूपैयाँले घटेको छ । आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ९३ हजार ८०० रूपैयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।
त्यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य ९३ हजार ३०० रुपैयाँ रहेको छ । चाँदीको मूल्य पनि आज घटेको छ । चाँदीको मूल्य आज प्रतितोला ५ रूपैयाँले घटेर १३ सय ५० रुपैयाँ कायम भएको महासङ्घले जनाएको छ ।